झापामा एम्बुलेन्स चालकलाई गाउँलेकाे अपमान « AayoMail
झापामा एम्बुलेन्स चालकलाई गाउँलेकाे अपमान
2020,5 June, 8:23 am
बालबालिकामा ‘डेल्टा भेरियन्ट’ संक्रमण हुने सम्भावना कति?
डेल्टा भेरियन्ट के हो? कोभिड-१९ को डेल्टा भेरियन्टलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘भेरियन्ट अफ कन्सर्न’ भनेको छ किनकि डेल्टा भेरियन्ट पहिचान गरिएका ठाउँहरूमा सो भेरियन्ट मानिसबीच द्रुत गतिमा फैलिएको पाइएको छ। के डेल्टा भेरियन्ट बढी संक्रामक छ? डेल्टा भेरियन्ट अघिल्लो भेरियन्टको
सर्वसाधारणलाई कोठामा बस्न नदिएको, कोरोना संक्रमितलाई छि:छि: दुरदुर गरिएको, स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार र कुटपिट गरिएको लगायत घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला झापामा एक एम्बुलेन्स चालक र उनकाे परिवार सामाजिक बहिष्कार सहन बाध्य भएको छ।
आफ्नो स्वास्थ्य दाउमा राखेर कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल पुर्‍याउन अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका एम्बुलेन्स चालकको सर्वत्र प्रशंसा भइरहँदा झापामा भने सामाजिक बहिष्कारको घटना भएको हो।
कचनकवल-२ का एम्बुलेन्स चालक योगेन्द्र सिलवालले समूहमा आएका गाउँले घर घेरेर गाली गालीगलौच गरेको बताए। ‘गाउँलेले यस्तो किन गर्नुभयो, कोरोनाले मानिस भकाभक मरिरहेको यो बेला अस्पताल पुर्‍याउनु मात्रै पनि धर्म हो,' योगेन्द्रले भने, ‘गाउँलेको यो कार्यलाई मानवीय भन्नै सकिन्न। गाडी निसंक्रमण गरेर, पिपिई लगाएर, सेनिटाइजर, मास्क लगाएर एम्बुलेन्स चलाउँदा पनि गाउँमा कोरोना फैलाउने भइस् भन्दै एक सयभन्दा बढी गाउँले आएर मानसिक तनाव दिएका छन्।’
कोरोना लागेका मानिस बोकेको गाडी किन गाउँमा ल्याएको, ल्याउन हुँदैन, तँ पनि आउन पाउँदैनस् भनेर गाउँलेले धम्क्याएको योगेन्द्रले सुनाए । 'यो मानिसले मानिसलाई गर्ने व्यवहार हुनै सक्दैन र होइन,' योगेन्द्र भन्छन्, 'पशुवत व्यवहार गरियो, म मात्रै खिन्न छैनँ, परिवारलाई नै तनाव दिइयो ।'
उनले कचनकवलकै क्वारेन्टाइनमा रहेका संक्रमितलाई धरान लगेका हुन्। चालकका छोरा सन्दीप सिलवालले बुवा कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल पुर्‍याउन गएपछि स्थानीयले दुर्व्यवहार गरेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
उनले अहिलेको विषम परिस्थितिमा एम्बुलेन्स चालकको मनोबल उच्च बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा गाउँले एकजुट भएर सामाजिक बहिष्कार गर्नु दुखलाग्दो भएको बताए।
योगेन्द्रले कचनकवल–२ को श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरव्दारा सञ्चालित मे१छ २२५७ नम्बरको एम्बुलेन्स २० महिना अघिदेखि चलाउँदै आएका छन्। प्रदेश १ मै कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ बनेको कचनकवलको स्थानीय भएको नाताले पनि संक्रमितलाई अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ।
तर, कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल लैजाँदा स्थानीयको अपमान सहनुगरेको सन्दीपले दुखेसो गरे। सिलवाल परिवारले किनमेल गरेको पसलमा अरु छिमेकी जान छोडेको, डेरीमा दूध पुर्‍याउन अवरोध गरिएको छ।
सन्दीप भन्छन्, बुवाले कोरोना संक्रमित बोक्दा हामीमाथि विभेद भयो, अरु कोही पनि एम्बुलेन्स चालकले यस्तो दुर्व्यवहार भोग्नु नपरोस्।
प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीले प्रतिवाद गरेपछि स्थानीयवासी पछि हटेका थिए। घटनालाई लिएर स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा छलफल भएको छ।जिल्ला प्रशासनले चालकको घर घेराउ गर्ने, दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, गाउँलेले चालक र उनको परिवारसँग माफी मागेपछि छाडिएको छ।
हामीलाई अपमान र दुर्व्यवहार गरे पनि गाउँलेलाई माफ गरिदिएको योगेन्द्रकी श्रीमती टीका सिलवालले बताइन्। 'उहाँहरुले जे गर्नुभयो, त्यसलाई कसैले राम्रो भन्दैन,' उनले भनिन्, 'महामारीको यो बेला कारबाही होइन, सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुपर्छ भन्ने सोचेर माफ गरिदियाैं।'
नेपाललाई हराउँदै भारत बन्यो आठौं पटक च्याम्पियन
माल्दिभ्समा भइरहेको १३ औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप भारतले जितेको छ। मालेस्थित राष्ट्रिय रंगशालामा शनिबार भएको फाइनल खेलमा नेपाललाई ३–० गोल
एक मिनेटको अन्तरमा भारतले लियो २ गोलको अग्रता
काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेलमा भारतले दुई गोल गरेको छ। माल्दिभ्सको राष्ट्रिय फुटबल रंगशालामा जारी खेलको
काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल यतिबेला जारी छ । माल्दिभ्सको राष्ट्रिय फुटबल रंगशालामा जारी खेलको पहिलो
आमरण अनसनरत रुबी खान अस्पताल भर्ना
काठमाडाैं – आमरण अनसनरत अधिकारमर्मी रुबी खान बिरामी परेकी छन्। नौ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेकी उनलाई शनिबार अपरान्ह त्रिवि शिक्षण